Football Khabar » युरोपा लिग अन्तिम १६ को ‘ड्र’ सार्वजनिक : कसको भिडन्त कोसँग ?
युरोपा लिग अन्तिम १६ को ‘ड्र’ सार्वजनिक : कसको भिडन्त कोसँग ?
युरोपको दोस्रो ठूलो क्लब फुटबल प्रतियोगिता युरोपा लिगमा अन्तिम १६ को ड्र सार्वजनिक भएको छ । आज स्वीट्जरल्यान्डको नियोनस्थित युइएफएको केन्द्रीय कार्यालयमा ड्र सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक ड्र यस्तो छ–
इस्तानबुल बासाकसेहिर भर्सेस कापेनहागेन
ओलम्पियाकोस भर्सेस उल्भ्स
रेङ्गर्स भर्सेस बायर लेभरकुसेन
उल्भ्सबर्ग भर्सेस शाख्तर डोनेस्टक
इन्टर मिलान भर्सेस गेटाफे
सेभिल्ला भर्सेस रोमा
फ्रान्कफुर्ट/रेड बुल भर्सेस बासेल
लास्क भर्सस म्यानचेस्टर युनाइटेड
अन्तिम १६ खेल्ने १५ वटा टोलीको टुंगो लागेर एक खेल बाँकी रहेकै अवस्थामा ड्र गरिएको छ । अझै अन्तिम ३२ को एक खेल बाँकी नै छ । जहाँ जर्मन क्लब फ्रान्कफुर्ट र अस्ट्रियन क्लब रेड बुलको खेल आज राति १०ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ । सो खेलको विजेता टिमले अन्तिम १६ मा बासेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
अन्तिम १६ मा पहिलो लेगका खेल आगामी मार्च १२ तारिखबाट सुरु हुँदैछन् । पहिलो खेलमा इन्टर मिलान र गेटाफेको खेल हुनेछ । खेल समय भने तय भइसकेको छैन । अन्तिम १६ मा इटालीका दुई क्लब मिलान र रोमा दुवैले स्पेनिस क्लब प्रतिस्पर्धी पाएका छन् ।
प्रकाशित मिति १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १८:४३